सङ्क्रमित र तिनका परिवारलाई अपहेलना नगरौँ - Karnali Diary - News Portal
राष्ट्रिय समाचार विचार समाचार सूचना-प्रविधि
– दुर्गा देवकोटा, टीकापुर ३० वैशाख (रासस) :
टीकापुर अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता कल्पना खड्का कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेकाले यसबाट बच्नका लागि दुव्र्यवहार गर्न आवश्यक नभएको बताउनुहुन्छ । “अप्ठ्यारो तथा समस्यामा चाहिने भनेकै छिमेकी हो । छिमेकी बिरामी भएर छटपटाइरहेका बेला उसलाई आवश्यक सहयोग गर्न कञ्जुस्याईं गर्नु गलत हो”, खड्का भन्नुहुन्छ, “चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले कसरी सेवा गरिरहेका छन् ? उनीहरुलाई पनि त मृत्युको डर होला ? चिकित्सकले यो समयमा गरेको सेवाबाट केही सिकौँ ।” स्टाफ नर्स खड्का समाजमा सद्भाव बचाइराख्न अप्ठेरोमा रहेकालाई सहयोग गरे अस्पतालमा पनि बिरामीको भीड कम हुने बताउनुहुन्छ । “अस्पतालहरुमा धान्नै नसकिने भीड छ, दूरी कायम गरेर सुरक्षित तवरले एक अर्कालाई सहयोग गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो बेला धेरै मानिस आत्तिएर मरिरहेका छन् । मानिसलाई शान्त रहन प्रोत्साहन गरौँ ।”
← सङ्क्रमितको घरमै पुगेर निःशुल्क सेवा दिँदै खड्का
बिरामी भर्ना नलिने भनाइप्रति प्रशासनको ध्यानाकर्षण →
April 7, 2022 April 7, 2022 राजकुमार सिंह 0